Tattooga qabyaaladda ee gacanta | Tattoo
Susana godoy | | Tattoos, Tattoo gacanta
Waxaa jira kuwa u maleynaya in tattoo-yada qabyaaladu ay yihiin taatikada ka baxday moodada, laakiin wax runta ka fog ma jiraan. Qabyaaladu wali waxay jeceshahay dad badan waana in moodooyinka ay aad u qaraabo yihiin maaddaama qaar naqshadeynta taatuuga ah ee dadka qaarkiis ay joojin karaan jeclaanta, kuwa kalena si kastaba ha ahaatee, Waxay weli noqon karaan naqshadaha ugu soo jiidashada badan ee lagu sawiro jirka.
Tattoo-ga qabyaaladda ee gacanta ayaa ah nooc ka mid ah tattoo-yada oo badanaa ay qaadaan ragga, laakiin haweenku sidoo kale way qaadi karaan haddii ay jecel yihiin. Arrin dhadhamin ma jiraan wax qoran oo muhiim ah ayaa ah in qofka ku sawira tatuursi qabyaaladeed gacantiisa uu ku raaxeysanayo taatikadiisa.
Kuwa qabyaaladu sidoo kale waxay noqon karaan kuwo aad u qurux badan oo qurux badan haddii lagu dhammeeyo xariiq wanaagsan. Tattoo-ga qabyaaladu wuxuu leeyahay taariikh dheer waxaana jira dad badan oo qarniyo badan sameeyay noolaha noocaas ah. Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta, maanta, tatuuxu ay weli ugu baahan yihiin dadka, rag iyo dumarba dhaqan kasta ha lahaadeene ama qayb ka mid ah adduunka.
Waxaa jira qaabab badan oo aad heli karto waxayna ku xirnaan doontaa dhadhankaaga haddii aad doorato mid ama kan kale. Haddii aad jeceshahay naqshad waxaad la qabsan kartaa jirkaaga si ay si fiican ugu habboon tahay. Tattoo-ga qabyaaladda ee gacanta ayaa ah ikhtiyaar fiican waxaadna dooran kartaa aagga gacanta aad ugu jeceshahay. Xitaa waxaa jira kuwa ku xarago qabiil qaab qaab jijimis ah si ay si fiican ugu habboon agagaarka gacanta. Xullo naqshadda aad ugu jeceshahay ka dibna, dooro farshaxan tattoo oo aad jeceshahay oo aad ogtahay in qaabkiisu ku habboon yahay dookhaaga. Tattooga qabyaaladda ee gacanta, haddii aad jeceshahay qabyaaladda iyo asalkooda, waxay noqon doontaa tattoo aad u guuleysta.
1 Noocyada Tattoo-ga qabyaaladda ee gacanta
1.1 Daarood Qabiil
1.2 Libaaxyada qabiilka
1.3 Silsilado Qabiil
1.4 Mayan qabyaalad
Noocyada Tattoo-ga qabyaaladda ee gacanta
Sidaan sifiican u ognahay, haduu jiro mid uunku qayb ka mid ah khiyaaliga iyo sheekooyinka, kuwani waa masduulayaal. Waxaan ku aragnay siyaabo badan, gaar ahaan shaashada yar ama weyn. Laakiin hadda waxay u gudbaan maqaarkayaga qaab qaabab masduulaagii qabaa'ilka ah. Waxaa jira macno badan oo loo aaneynayo iyaga, maadaama ay kuxirantahay dhaqanka.
Qaarkood waxay la mid ahaayeen abuurayaasha ama ilaaliyeyaasha, laakiin kuwa kale, xiriirkoodu wuxuu ku dhawaa geerida. Dabcan markaan ka hadlayno waxa ku saabsan Tattoo masduulaagii qabiilka, waxaan ku hagaajin karnaa fikradaha aan aadka u jecel nahay iyo waliba cabirka aan dooneyno, iyadoo kuxiran qeybta jirka meesha aan u qaadaneyno. Fursadaha waa kuwo badan oo kala duwan. Laakiin dhammaantood waxay ku sii jiraan astaamaha markasta xukunka.
Sidee bay uga yaraan kartaa, libaaxu wuxuu ka mid yahay xayawaanka ugu awoodda badan. Sidaa awgeed, waxay isaga u kala saareen inuu yahay boqorka hawdka. Waa wax iska caadi ah inay ku xirnaato xoog ama geesinimo iyo sidoo kale awood. The Tattoo libaax qabyaaladeed sidoo kale waxay sameeyaan matalaad dhammaan astaamahan ku xiran adduunka ruuxi ah. Sidaa darteed, waa inaan marwalba maskaxda ku haynaa khadadka iyo qaababka u qorsheysan doona xayawaan sidan oo kale ah. Waxaad dooran kartaa inaad xirato oo keliya wajigaaga ama jirka oo dhan si aad uhesho qurux badan maqaarkaaga.
Waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu badan ee la daawado markaan ka hadlayno Tattoo qabyaaladeed. Silsiladaha ayaa qurxin kara qaybaha kala duwan ee jirka laakiin dhammaantood, gacmuhu waa kuwa ugu cadcad. Jidadka qaarkood waa la dhexgalay marmarka qaarkood xitaa waxay u egyihiin qodax, sidaa darteed fikradahooda ayaa had iyo jeer ku kala duwanaan doona. Waa run in sida caadiga ah, silsiladuhu ay la mid yihiin inay ku hoos jiraan cadaadis gaar ah. Laakiin sidoo kale waxaan siin karnaa macnaha ku habboon mid kasta. Maaddaama qabyaladu aysan lahayn dhammaadkaas sidii loo xiray silsiladihii aasaasiga ahaa. Sababtaas awgeed, xorriyadda iyo caqiidooyinka ayaa ah waxa ku soo duulay.
Mayaanku waxay xireen tattoos badan mid walibana macno cusub ayuu lahaa. Calaamadihiisu way sii jireen sanado badan oo intaa ka badan waana taas tan keentay in dhaqanku ilaa maanta la ilaaliyo. Labadaba ilaalinta iyo caqiidooyinka ruuxiga ah waxay ahaayeen macnaha weyn ee astaantooda. Xayawaanka ama dhulka iyo qorraxda ayaa sidoo kale ka dhex muuqday. Barwaaqada iyo isbeddeladu sidoo kale waa astaamo ka yimaad iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoo qabyaaladeed gacantiisa
Xiiso leh dhamaan tataujes
Jawaab Juan Challco Lenes
Tattoos xiiso leh
Tattoo quruxsan oo loogu talagalay haweenka iyo ragga: su'aasha jinsiga?